Artist of the Week | Artist Khabar
Artist of the Week	Teriya Magar	..	Panna kaji Shakya	गायक तथा संगीतकारः पन्नाकाजी शाक्य
जन्मः बि. सं १९८८ पुस १५
मृत्युः बि.सं. २०७३ माघ..	Anil Adhikari ‘Yama Buddha’	..	Bishnu Bhakta Phuyal	..	Samundra Bhatta	Director Samundra Bhatta
First Direction Movie: 'Adha Page'
आर्टिस्ट आफ द विक (Artist of the week) मा हामी हरेक साता एक कलाकारसँग कुरा गछौं । यस कार्यक्रम देवचुली टेलिभिजन र आर्टिस्ट खबर डटकमको सहकार्यमा बनेको कार्यक्रम हो । देवचुली टेलिभिजनबाट पनि हरेक साता बुधबार प्रसारण हुने गर्दछ..	Sanjiv Poudel	Singer Sanjiv Poudel
आर्टिस्ट आफ द विक (Artist of the week) मा हामी हरेक साता एक कलाकारसँग कुरा गछौं । यस कार्यक्रम देवचुली टेलिभिजन र आर्टिस्ट खबर डटकमको सहकार्यमा बनेको कार्यक्रम हो । देवचुली टेलिभिजनबाट पनि हरेक साता बुधबार प्रसारण हुने गर्दछ..	Rishi Lamichhane	आर्टिस्ट आफ द विक (Artist of the week) मा हामी हरेक साता एक कलाकारसँग कुरा गछौं । यस कार्यक्रम देवचुली टेलिभिजन र आर्टिस्ट खबर डटकमको सहकार्यमा बनेको कार्यक्रम हो । देवचुली टेलिभिजनबाट पनि हरेक साता बुधबार प्रसारण हुने गर्दछ..	Rupak Dotel	Singer Rupak Dotel
आर्टिस्ट आफ द विक (Artist of the week) मा हामी हरेक साता एक कलाकारसँग कुरा गछौं । यस कार्यक्रम देवचुली टेलिभिजन र आर्टिस्ट खबर डटकमको सहकार्यमा बनेको कार्यक्रम हो । देवचुली टेलिभिजनबाट पनि हरेक साता बुधबार प्रसारण हुने गर्दछ..	Madan Thapa	Singer Madan Thapa
आर्टिस्ट आफ द विक (Artist of the week) मा हामी हरेक साता एक कलाकारसँग कुरा गछौं । यस कार्यक्रम देवचुली टेलिभिजन र आर्टिस्ट खबर डटकमको सहकार्यमा बनेको कार्यक्रम हो । देवचुली टेलिभिजनबाट पनि हरेक साता बुधबार प्रसारण हुने गर्दछ..	Raj Chhitij	Model: Raj Chhitij
आर्टिस्ट आफ द विक (Artist of the week) मा हामी हरेक साता एक कलाकारसँग कुरा गछौं । यस कार्यक्रम देवचुली टेलिभिजन र आर्टिस्ट खबर डटकमको सहकार्यमा बनेको कार्यक्रम हो । देवचुली टेलिभिजनबाट पनि हरेक साता बुधबार प्रसारण हुने गर्दछ..	Pages:1234»